Ungayikhetha kanjani imishini yokugcwalisa efanelekile ngokusho komkhiqizo? - Micvd.com
Ngabe wethula umkhiqizo omusha emakethe? Kunokuhlela nobunjiniyela obuningi okudingeka kwenziwe ngaphambi kokuthi ukhiphe umkhiqizo omusha emakethe, futhi kuningi ukukhetha okufanele kwenziwe. Enye yalezo zinketho ukuthi uzogcwalisa kanjani iziqukathi zomkhiqizo omusha. Abakhiqizi abaningi bakhetha ukugcwalisa iziqukathi zabo ngesisindo, ngevolumu, noma ngomugqa wokugcwalisa. Nakhu ukubuka konke ngakunye nokuthi zingasetshenziswa nini.
Umshini Wokugcwalisa Ibhodlela Webhodlela
Lapho ugcwalisa ngesisindo, umshini we-filler othomathikhi ubeka inani elisindayo esitsheni. Ngokuya ngokuhlukahluka okuncane ekukhiqizweni kwesitsha okungenzeka, umkhiqizo ungafika ezingeni elihlukile kancane nesiqukathi ngasinye. Konke kusazoqukethe inani elifanayo lomkhiqizo, noma kunjalo. Lokhu kungabaluleka embonini yezokudla.
Umshini wokugcwalisa wePiston Syrup
Lapho usetha umshini wokugcwalisa uketshezi ukugcwalisa iziqukathi zakho ngevolumu, inani elithile le-fluid lifakwa esitsheni ngokuhambisana nenani lomzimba lomkhiqizo. Lapho ugcwalisa ngevolumu, ngokuvamile iziqukathi zakho zigcwaliswa cishe ngezinga elifanayo, yize kungahluka ngokuhlukahluka kwesiqukathi. Ukugcwalisa ngevolumu kuvame ukusetshenziswa yizimboni ezigcwalisa amabhodlela epulasitiki nawengilazi. Lokhu kungafaka izinkampani ezikhiqiza amakhemikhali ahlukahlukene, abahlanza, abasebenza ngemithi, noma abengezayo.
Lapho ugcwalisa iziqukathi zakho ngezinga, umshini wakho uzogcwalisa isitsha ngasinye kufinyelela inani elifanayo, akunandaba nesisindo noma ivolumu. Lokhu kusho ukuthi zonke iziqukathi zakho zizovela zibambe inani elifanayo, elilungele amabhodlela nezimbiza ezicacile futhi zivumela abantu ukuthi babone umkhiqizo. Eminye yezimboni ezigcwalisa ngokugcwalisa ulayini ifaka isiphuzo, ubhiya wezandla kanye nezimonyo.
Uma ungenaso isiqiniseko sokuthi hlobo luni lokugcwalisa oluzoba ngomkhiqizo womkhiqizo wakho, singakusiza uhlole izidingo zakho futhi unikeze isixazululo esisebenzayo nesisebenzayo. Xhumana nathi namuhla ukuze ufunde kabanzi.
umshini wokugcwalisa ubungako
umshini wokugcwalisa ipompo
umshini wokugcwalisa u-volumetric
umshini wokugcwalisa amapompo kanye nomshini we-capping
i-liquid piston filler
umshini wokugcwalisa isiraphu wezokwelapha ozenzakalelayo womlomo
umshini wokugcwalisa isiraphu ozenzakalelayo
umshini wokugcwalisa ugesi osisi-othomathikhi
umshini wokugcwalisa we-barrel fluid
umshini wokugcwalisa ugesi wamakhemikhali ozenzakalelayo
uhlelo lokugcwalisa uketshezi
umshini wokugcwalisa i-volumetric
Izisetshenziswa Ezincane Zokugcwalisa Amafutha Obhotela
umshini wokugcwalisa u-piston
umshini wokugcwalisa i-auger
umshini wokugcwalisa we-peristaltic
umshini wokugcwalisa iphampu we-peristaltic
umshini wokugcwalisa amandla kagesi
Umshini we-othomathikhi we-Amafutha Ebhodlela Ozenzakalelayo
imishini yokugcwalisa ibhodlela ezenzakalelayo
oem high density e umshini wokugcwalisa uketshezi
othomathikhi be-oli yamafutha omnqumo we-olive
umshini wokuwasha othomathikhi wokugcwalisa ibhodlela
umshini wokugcwalisa ugesi wogesi
imishini yokugcwalisa ukhilimu ozenzakalelayo
umshini wokugcwalisa i-piston wokuwashisa ophethe i-disinfectants
umshini wokugcwalisa ugesi wamabhodlela othosi
ukugcwaliswa jar kanye nomshini we-capping
umgqomo othomathikhi onesisindo se-filler
umshini wokugcwalisa ibhodlela lika-soya othomathikhi
umshini wokugcwalisa nowokufaka i-caching wamafutha wesinaphi
okuzenzakalelayo 30-50 bpm mini umshini wokugcwalisa ibhodlela le-na
isicubu sebhodlela esishisayo
Ifekthri yePiston Chemical Filler
umshini wokugcwalisa othomathikhi kanye nomshini wokufaka uphawu
umshini wokugcwalisa we-glue ozenzakalelayo ogcwele, uhlelo lokugcwalisa i-gel
Umshini wokugcwalisa weSesame